*** Rent the KanTarYar Residence *** - Home Myan
Mingalar Taung Nyunt Township, KanTarYar Residence
– 1580 sqft
–6Air Conn
– BBQ pitch
– nice view Shwedagone Pagoda & KanDaw Gyi
– You can move December 16, 2020
=> 2300 USD per month
Notice : tell me please! Two day before appointment time.
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ Delta Plaza
115 Views May 27, 2019
သင်္ကးကျွန်းမြို့နယ်၊ ရွှေအင်ကြင်းရိပ်မွန်ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်
1676 Views May 26, 2018
လမ်းမတော်၊ ဘုန်းကြီးလမ်းရှိရောင်းရန်ရှိသော ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်
192 Views September 11, 2018